Bit By Bit - Running kuedza - 4.5 Kuita zvichiitika
Kunyange kana usingabvumirani kushanda pane imwe Tech kambani hombe unogona kumhanya digitaalinen kuedza. Unogona kana kuzviita pachako kana mumwe nomumwe munhu anogona kukubatsira (uye ndiani unogona kubatsira).
By pfungwa iyi, ndinovimba kuti imi muri kufara pamusoro yaibvira kuita kwako digitaalinen kuedza. Kana kushanda pane imwe Tech kambani hombe ungave kutowanikwa kuita kuedza izvi nguva dzose. Asi, kana musingadi kushanda pakambani Tech ungafunga kuti haugoni kumhanya digitaalinen kuedza. Sezvineiwo, ndizvozvo zvakaipa; vane zvishoma okugadzira zvinhu uye zvakaoma, vose vanogona kumhanya digital chiedzwa.
Danho rokutanga, zvinobatsira kusiyanisa nzira huru mbiri: achizviita pachako kana partnering pamwe simba. Zvino, pane ivo vaviri dzakasiyana kuti unogona kuzviita pachako; unogona kuedza muna huripo runyararo, kuvaka yako kuedza, kana kuvaka yako chigadzirwa nokuda inodzokororwa kwacho. Ndichaenda kuenzanisira nzira idzi mijenya yemienzaniso pazasi, uye paunenge uchidzidza pamusoro pavo unofanira kuona sei neimwe nzira inopa kutengeserana-offs pamwe zvina huru kukura: cost, kuzvidzora, realism, uye magariro (Figure 4.11). No nzira ndiyo yakanakisisa mumamiriro ose ezvinhu.
Figure 4.11: Summary wezvokutengeserana-offs nokuda dzakasiyana kuti iwe unogona kuita yetsvakurudzo yenyu zviitike. By mutengo ndinoreva mari kuti mutsvakurudzi tichitarisa nguva uye mari. By kuzvidzora ndinoreva kuita zvaunoda maererano arirwise vechikamu randomization, achiendesa marapiro, uye kuyera zvaitika. By realism ndinoreva pakuti chisarudzo kwezvakatipoteredza machisi avo vasangana muupenyu hwezuva nezuva; ona kuti matunhu realism haasi kukosha kunovhenekwa Dzidziso nguva dzose (Falk and Heckman 2009) . By hwetsika ndinoreva mano nevatsvakurudzi chakanaka kushandisa chemufungo matambudziko kungamuka.